Apple waa inay xirtaa mar kale Dukaanka Apple ee Michigan sababtoo ah faafa | Waxaan ka socdaa mac
Apple waa inay xirtaa Michigan Apple Store mar kale cudurka faafa awgeed
Wax ka yar sanad kadib markii ay na weerareen cadaw yar laakiin naxariis daran oo horeyba u qaatay in ka badan seddex milyan oo qof adduunka oo dhan, xaaladda aafada waxay umuuqataa inay xoogaa kasoo wanaagsanaanayso, laakiin waxaan la kulannaa dib u dhacyo marwalba. Dhaqaalaha ma awoodo inuu dib u soo cesho sidii la rabay maxaa yeelay heerka infekshanku wali aad buu u sarreeyaa. Taasi waa waxa ka dhacay Michigan sababtaas awgeedna Apple Stores-ka magaalada waa inay, mar labaad, xir gebi ahaanba.
In kasta oo Apple ayan ka mid ahayn kuwa ugu badan ee uu saameeyay aafada dhaqaale, haddana ma ahan mid gebi ahaanba laga badbaaday. Dukaammada Apple ee adduunka ayaa xirnaa muddo dheer si looga hortago fiditaanka cudurka Coronavirus. Qaar yar baa furayay, qaar kalena way xirmayeen, waxay umuuqatay in waqtiga uusan waligiis imaan doonin in la wada furo dhamaantood, uguyaraan hal wadan gabi ahaanba. Laakiin tani waxay ahayd kiiska dhawaan ka dhacay Ingiriiska. Si kastaba ha noqotee, Mareykanka wuxuu umuuqdaa inuusan gaarin heerkaas. Michigan waa inay xirtaa markale.
Wadar ahaan waxaa jira lix dhibcood oo iib ah magaalada oo ay tahay inay markale xirmaan. Waa qiyaas "ku meel gaar ah" sababtoo ah xaaladaha hadda jira ee COVID-19 ee gobolka. Ku Liiska dukaanka Michigan Xaqiiji in ay xiran yihiin mustaqbalka dhow, iyadoo aan la ogeyn goorta ay dib uga furi doonaan dadweynaha. "Waxaan usameyneynaa talaabadan si taxadar leh madaama aan si dhow ula soconayno xaalada waxaana rajeyneynaa inaan dib ula soo laabano kooxdeena iyo macaamiisheena sida ugu dhaqsiyaha badan
Kuwii ballan la lahaa taageerada farsamada ama ay ahayd inay amar soo qaadaan, way sameyn karaan sidaas illaa Abriil 18. Si kastaba ha noqotee, laga bilaabo taariikhdaas ma awoodi doontid inaad wax ka iibsato Apple haddii aad joogto Michigan. Waxaan u baahan nahay inaan sii wadno samirka iyo ka sarreeya dhammaan madaxa. Waxaan rajeyneynaa inaan si dhakhso leh u dhammeyno oo aan ugu laabanno xaalad horey u jirtay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waa inay xirtaa Michigan Apple Store mar kale cudurka faafa awgeed
Nidaamyada quusitaanka "Anti-bubble" waxaa loo isticmaalay in lagu duubo "Microworlds" Apple TV +
Heerka aaladaha guryaha la jaan qaadi kara, oo ay taageerto shirkadda Apple, ayaa la heli doonaa dhammaadka sannadka 2021